यस्तो छ देशभरको प्रारम्भिक मतपरिणाम, कसको मत कति ?
HOME » यस्तो छ देशभरको प्रारम्भिक मतपरिणाम, कसको मत कति ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिले अलगअलग गठबन्धन बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्।
गठबन्धन बनेमा प्रजातान्त्रिकभन्दा वामपन्थी गठबन्धन अगाडि देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको आधारमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले ५१ प्रतिशत पपुलर मत ल्याउने देखिन्छ।
त्यस्तै, राप्रपादेखि मधेसी सबै दललाई जुटाउन सकेमा कांग्रेसले ४४ प्रतिशत मत जम्मा गर्न सक्ने देखिन्छ। एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनको त न्यूनतम सहमति पनि हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहमा प्राप्त मतका आधारमा विश्लेषण गर्दा २ लाख मत कटाउनेमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा गरी ६ दल मात्रै देखिएका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा दुई लाख मत नकटाएका फोरम, राजपाले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा मत बढाई २ लाख कटाएका हुन्। यही मत कायम राखेको अवस्थामा राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना देखिएको हो। त्यसैगरी, फोरम लोकतान्त्रिकले १ लाख २४ हजार र स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवारहरूले १ लाख १९ हजार मत कटाएका छन्।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्यणमन्त्री भएका कुमार खड्काको पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा ४०५ मत ल्याएको छ। ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट १ सिट जितेर सांसद भएका खड्का पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदा महिला तथा बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री भएका थिए। त्यसैगरी, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एकनाथ ढकालको परिवार दलले १ हजार २२० मत ल्याएको छ। अहिले वाम गठबन्धनमा मिसिएका ढकालले गठबन्धनबाट एउटा सिट दाबी गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहमा समानुपातिकतर्फ मतदान नभएकाले कुनै पनि दलको एकमृष्ट मत निश्चित गर्न असम्भव छ। हरेक स्थानीय तहमा एक दलका सातजना उम्मेदवार थिए। निर्वाचन आयोगले ती सातैजना उम्मेदवारको मत जोडेको छ। जस्तो कि सबै स्थानीय तहमा एमालेका सातै उम्मेदवारको मत जोड्दा दुई करोड १४ लाख ५१ हजार हुन्छ। तर, ती सातजना उम्मेदवारलाई दिने एकजना मतदाताको हिसाब गर्दा औसतमा एमालेको मत ३० लाख ६४ हजार ५३९ हुन्छ। यो कुल खसेको मतको ३४ प्रतिशत हो । त्यस्तै कांग्रेसले २९ लाख ८२ हजार २४० अर्थात् ३३ प्रतिशत र माओवादीले १६ लाख दुई हजार ४५० अर्थात् १७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । गठबन्धन भएका स्थानमा पनि केही पदमा अर्को दललाई मत दिएका दलले केही पदमा अर्को दलबाट मत पाएका छन् । त्यसैले उनीहरूको मत पनि औसतमै हिसाब हुन्छ।
– स्थानीय तहमा प्राप्त मतको आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि ६ देखि ७ दल मात्रै राष्ट्रिय दल बन्ने देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ३ प्रतिशत मत ल्याउने दल मात्र राष्ट्रिय दल बन्छ र त्यस्तो दलले मात्र समानुपातिकमा सिट पाउँछ। यही अनुपातमा मत खसेमा बढीमा ७ दल मात्रै राष्ट्रिय दल बन्न सक्ने पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको विश्लेषण छ।
– एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राजपा र बढीमा फोरम लोकतान्त्रिकले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत कटाउन सक्छन्। त्यसो हुँदा यी दल राष्ट्रिय दल बन्न सक्नेछन् । तर, प्रत्यक्षमा एक-दुई सिट जित्न सक्ने नेमकिपाजस्ता दलले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत ल्याउन नसक्ने हुँदा राष्ट्रिय दल बन्न गाह्रो छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।